Almaaz Ayyaanaa mt 5000n Shanghai Diamond League moo'atte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Almaaz Ayyaanaa mt 5000n Shanghai Diamond League moo’atte
Kan Almaaziin eege heddu hinturre. Ijaafi gurri hundaa waan Bogdaan Bondarenkoofi Mutaaz Barshim godhuuf deeman dhagayuuf kan qophaaye. Garuu, gootittiin Almaaz Ayyaanaa fiigicha meetira 5000n Shanghai Diamond League injifachun xiyyeeffannaa hundaa gara isiitti akka deebi’u taasiste.
Saffisni Almaaz ittiin galtee, inni meetira 5000, seenaa keessatti isa 3ffaati: sa’aa Xurunesh Dibaabaafi Masarat Daffaar galmeessisanii turanitti aanee. Kana dura Almaaz sa’aa kanatti galtee hinbeektu. Ufii isiif sa’aa haarawa galmeessiste. Almaaz sa’aa hunda isaanii tarii nifooyyessiti ta’a ture, jedha gabaasan IAAF, osoo gara dhumaa morkiin cimaan isii mudateera turee. Kana godhuu kan isii dhoorge, akka gabaasa IAAF itti, Almaaz meetira 150n morkattoota isii duubatti gattee galuu isiiti.
Almaaz Ayyaanaa injifannoof haarawaa miti. Bara 2013 fi 2014 Marakaash, Morokotti IAAF World Championships fi IAAF Continental Cup 3ffaa taatee xumurteerti. Woggaa 2 duras Paris IAAF Diamond League irratti 2ffaa ta’uun badhaafamte.
Almaaz Ayyaanaa, umriin 23, gara funduraatti abdii guddaa kan qabdu ta’uu isiiti kan dubbatamu.
Previous articleAfrican nations made gains towards achieving MDGs, WHO data shows
Next articleWashington Post: As Ethiopia votes, what’s ‘free and fair’ got to do with it?